Warbixin: Turkigu Waxa uu Dhallinyarada Soomaalida ka Caawiyaa Sidii ay u Rumayn Lahaayeen Riyooyinkooda | Gabiley News Online
Warbixin: Turkigu Waxa uu Dhallinyarada Soomaalida ka Caawiyaa Sidii ay u Rumayn Lahaayeen Riyooyinkooda
Nin dhallinyaro ah oo magaciisu yahay Dr. Maxamed Axmed oo cilmiga caafimaadka ku bartay jaamacad ku taal waddanka Turkiga, ayaa sheegay in Turkigu yahay waddan ku tallaabsaday horumar dhinacyo kala duwan ah, iyadoo ay taasina sababtay inuu soo jiito dhallinyarada jecel tacliinta iyo horumarinta naftooda.
Warbixin lagu faafiyey wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Agency, ayaa lagu sheegay in Dr. Maxamed Axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah uu aamisan yahay in dalka Turkigu noqday waddan bartilmaameed muhiim ah u ah dhallinyaro badan oo Soomaali ah, si ay halkaas uga helaan waxbarasho heer sare ah oo u suurtogelisa inay ka dhabeeyaan hiigsigooda mustaqbalka ama ay u rumeeyaan riyooyinkooda ay hiigsanayaan mustaqbalka.
Dr. Maxamed Axmed waa wiil dhallinyaro Soomaali ah oo ka qallin-jabiyey Jaamacadda Antalya (Antalya University) oo ku taal magaalada Antalya ee dhacda xeebta badda dhexe (Mediterranean), iyadoo uu Maxamed Axmed ilaa xiliyadii uu da’da yaraa uu ku hamiyi jiray inuu mar uun wax ku soo barto dalka Turkiga.
Haddaba, Dr. Maxamed Axmed oo waraysi siiyey wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu (Anadolu Agency) toddobaadkan, waxa uu sheegay in ay riyadiisii si dhab ah ugu rumowday, kadib markii uu ku guulaystay in waxbarasho ka bilaabo Jaamacadda Antalya ee dalka Turkiga sannadkii 2013-kii, kaasoo jaamacaddaas ka qallin-jabiyey sannadkii 2017-ka, isagoo xilligana ka hawlgala cusbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaal magaalada Ankara ee Turkiga.
Waxa kaloo uu tilmaamay inuu si fiican uga aflaxay waxbarashada caafimaadka iyo dhaqaalaha ee uu dalka Turkigu ku horumarsan yahay, waxaannu sheegay inuu jecelyahay sidii uu sare ugu sii qaadi lahaa aqoontiisa dhinaca caafimaadka, iyadoo ay u qorshaysan tahay inuu noqdo dhakhtar ku takhasusay qalliinka xididada dhiigga ee xidhma (blocked blood vessels) ama isku soo dhuubta (narrowed blood vessels), kuwaasoo sababa wadno-xannuunka ama wadno-istaaga (heart attacks).
“Dalka Turkigu waa waddan muslim ah oo mustaqbalkiisu ifayo. Marka aynu ka hadlayno dalalka kale ee islaamka ah, waxyaabaha ugu horeeya ee markiiba ku soo dhacaya maskaxmaadu waa inay yihiin dalal aan horumarsanayn iyo inay dhaqaale ahaan daciif yihiin, laakiin Turkigu taas wuu ka duwan yahay oo waa waddan dhinac walba horumar ka gaadhay,” ayuu yidhi Dr. Maxamed Axmed.
Digtoorkan dhallinyarada ah, ayaa sidoo kale caddeeyey in dalka Turkigu horumar weyn ka gaadhay cilmiga soo saarista iyo farsamaynta daawooyinka (pharmaceutical industry), halka uu sidoo kale iftiimiyey in muwaadiniinta Turkigu yahay dad wanaagsan oo soo dhawayn iyo marti-soor fiican, iyadoo ay taasina sabab u noqotay in waddanka Turkigu noqdo meel ay ku soo hirtaan bulshada ajaanibka ah.
Dr. Maxamed Axmed, ayaa sheegay inuu jiro xidhiidh qoto-dheer oo ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaalida, xidhiidhkaas oo soo bilawday ilaa waqtigii ay Dowladdii Cusmaaniyiintu talin jirtay, iyadoo uu xusay in bulshada Soomaalida ah ay si fiican u xasuusan yihiin wanaagga iyo jacaylkii dowladda Cusmaaniyiinta.
“Meeshani waxaa muuqata muqaal ah in ajnabi-naceyb aannu ka jirin halkan. Markaa dabcan waa meel ku soo jiidaneysa. Turkigu waa meel nolosha ku wacan,” ayuu yidhi Dr. Maxamed Axmed.
Waxa kaloo uu ka hadlay quruxda dabiiciga ah ee uu leeyahay dalka Turkigu, waxaannu yidhi; “Tusaale, Istanbul waa magaalo kulansatay dhammaan quruxdii adduunka oo dalal badan uu kala duwan ay lahaayeen. Istanbul waxay kulansatay bad iyo qurux kale oo dabiici ah. Turkidu waa dad ay dhaleen Cusmaaniyiintu, kuwaas oo mar maamuli jiray 3 meelood 2 meel dunida oo dhan ah. Bulshada Turkidu waa dad ilbax ah, waana deeqsi dhanka taariikhda, taasina waa tan xoojineyso xidhiidhka innaga dhexeeyo.”
Shiine Cilmi Kaahin – HargeisaPress News Desk— ANKARA